साञ्जेन र रसुवागढीको आइपिओ खुल्यो, कतिसम्म पाइन्छ भर्न ? – News Dainik
साञ्जेन र रसुवागढीको आइपिओ खुल्यो, कतिसम्म पाइन्छ भर्न ?
News desk ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ११:४४ उर्जा प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैँ । आजदेखि साञ्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ बिक्री खुला भएको छ । लगानीकर्ताले न्युनतम १० कित्तादेखि आवेदन दिन पाउनेछन् । रसुवागढीले ९३ लाख ३९ हजार ४६७ कित्ता सेयर सर्वसाधारणको लागि खुला गरेको हो ।
कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर सर्वसाधारणका लागि सो परिणामको आइपिओ बिक्री खुला गरेको हो । यसैगरी साञ्जेनले पनि कर्मचारी र म्युचुअल फण्डलाई छुट्याएर सर्वसाधारणमा ४९ लाख ८२ हजार २ सय ५० कित्ताका लागि आवेदन खुलाएको हो ।
साञ्जेनमा अधिकतम २ हजार र रसुवागढीमा अधिकतम ५ हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
अघिल्लॊ जिल्ला प्रशासनमा बुझाइयो १७ थान हातहतियार
पछिल्लॊ देवः विकास बैंकका ५.५% बोनस शेयर प्रस्ताव